Air Senegal si ay u kordhiso raxankeeda sideed Airbus A220s
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air Senegal si ay u kordhiso raxankeeda sideed Airbus A220s
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • Shirka Warka Warshadaha • News • Wararka Senegal • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Air Senegal, duuliyaha cusub ee qaran ee Senegal, wuxuu saxiixay Is-afgarad (MoU) muddo sideed ah Airbus Diyaaradaha A220-300.
Is-fahamka ayaa maanta la saxiixay iyadoo uu goobjoog ka ahaa Mudane Alioune SARR, Wasiirka Dalxiiska iyo Gaadiidka Senegal.
Waxtarka 'A220s' wuxuu awood u siinayaa Air Senegal inay yareyso qarashka ku baxa duulimaadka iyadoo u siineysa rakaabka raaxo aan la koobi karin inta ay le'eg yihiin. Horaantii sanadka 2019, diyaaraduhu waxay ahayd diyaaradii ugu horeysay ee Afrikaan ah ee duulisa Airbus 'jiilka cusub ee balaadhinta balaaran, A330neo, oo ay kujiraan matoorro teknolojiyad casri ah, baalal cusub oo leh aerodynamics kor uqaaday iyo naqshad baalasheed qalooca ah, oo qaababkii ugufiicnaa kasoo qaatay A350 XWB.
Mr Ibrahima Kane Air Senegal Senior ayaa yiri “220-ka diyaaradood ee cusubi waxay gacan ka geysan doonaan horumarinta shabakaddeenna muddada-dheer ee Yurub iyo shabakadeena gobolka ee Afrika. Marka lagu daro diyaaradeennii ugu dambeysay ee A330neo, diyaaradan cusub ee Airbus waxay muujineysaa hamiga Air Senegal inuu siiyo khibradda ugu wanaagsan ee safar ee rakaabkeenna.
“Tirada hawlgallada A220s ee qaaradda Afrika ayaa si isdaba joog ah u sii kordheysa waxaana ku hanweynahay in aan ku darno calankeenna cusub ee Senegal liiskayaga macaamiisha Afrikaanka ah ee A220. Iyadoo bixineysa qiimaha ugu hooseeya ee howlaheeda, A220 waa diyaaradda ugu fiican ee shirkadaha duulimaadyada si ay u bilaabaan wadooyin cusub oo gudaha iyo dibedda ah si hufan, ”ayuu yiri Christian Scherer Chief Commercial officer sarkaal Airbus.
A220 waa diyaaradda kaliya ee ujeedka loo dhisay ee loogu talagalay suuqa kuraasta 100-150; waxay keentaa waxtarka shidaalka ee aan laga adkaan karin iyo raaxada rakaabka ballaaran ee diyaarad hal lug ah. A220 wuxuu isu keenayaa aerodynamics casri ah, qalab casri ah iyo jiilka ugu dambeeya ee Pratt & Whitney PW1500G matoorro turbofan ah si ay u bixiyaan ugu yaraan 20 boqolkiiba gubashada shidaalka halkii kursi marka la barbar dhigo diyaaradaha jiilkii hore, oo ay weheliso qiiqa aadka u hooseeya iyo a raad buuq yaraaday. A220 wuxuu bixiyaa waxqabadka diyaarado hal-lugood oo waaweyn ah. Dabayaaqadii Oktoobar 2019 A220 waxay uruurisay 530 amar.